Wanaagsan-bye in English. Wanaagsan-bye Meaning and Somali to English Translation
Home>Words that start with G>good-bye>wanaagsan-bye (Somali to English translation)
What does wanaagsan-bye mean in English? If you want to learn wanaagsan-bye in English, you will find the translation here, along with other translations from Somali to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is wanaagsan-bye meaning in English:
Ma rabtaa inaad khamri qaar ka mid ah?
My watch ayaa la xaday
Nice oo idinka mid ah inay saas ha odhan
Taas macnaheedu waa saaxiib
Waxaan jeclaan lahaa miiska u dhow suuqa kala
Yaa warqaddan soo diray?